နိုင်ငံသား Buba မှပေးစာ: လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းမှတုံ့ပြန်မှု Dousing (2)
အားဖြင့် Posted: မေလ Anokuru ဧပြီလ 2, 2014
ပိုးတောင်မာ, သင်က MYTO အသိအမှတ်ပြုသည်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, မိတ်ဆက်စကားအပေါ်, အနိမ့်ဆုံး segment အတွတ်မှုနှုန်းအပေါ်အစိုးရ၏ထောက်ပံ့ငွေနှင့်အတူကြွလာ (လူမှုစီးပွား) စားသုံးသူများ၏, ထိုနေထိုင်သူများက 1 (R1) အမျိုးအစား. "ထောက်ပံ့ငွေမရှိထာဝစဉ်တည်တံ့သွား" အဖြစ်, ဒီနှစ်လယ်ပိုင်းကဖယ်ရှားခံရမည် 2014, လျှပ်စစ်မီးဈေးကွက်ဆောင်တတ်၏ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကမောင်းနှင်အရာကိုလူများရဲ့ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်လုံလောက်သောအခန်းအပ်ပေးတော်မူပြီးမှ.
နိုင်ဂျီးရီးယားလျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာကော်မရှင်သို့မဟုတ် NERC လျှပ်စစ်မီးဖောက်သည်များကဥပဒေကြမ်းအဖြစ်ပေးဆောင်ရမည့်သည်အဘယ်အရာကိုအဆုံးအဖြတ်များ၏တာဝန်နှင့်အတူ straddled ဖြစ်ပါတယ်, အဲဒီပုဂ္ဂလိကပိုင် operated လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူး network operator မ (dno). ထို MYTO ထံမှကုန်သွယ်ခွန်အားလုံး DNOs အတွက်အလားတူမဟုတ်.
နိုင်ငံသား Buba, တစ်ဦးအထက်သို့မျှော်လင့် (မဖြစ်စလောက်သော်လည်း) အချိန်အဖြစ်လျှပ်စစ်မီးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်သွား. ဒါဟာ NERC ရဲ့ကုန်သွယ်ခွန်အတွက်အတော်လေးတိကျပြတ်သားသည်, ဇွန်လအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 2012, စွမ်းအင်တာဝန်ခံနှင့်ပူးတွဲပါ fixed လစဉ်ဝန်ဆောင်ခနှစ်ခုလုံးက, ဖောက်သည်များ၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားခွဲများအတွက်, အနည်းငယ်နှစ်စဉ်တိုးပွားများပြား. နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့အကောက်အခွန်စနစ်အောက်မှာ, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဈေးနှုန်းတိုင်းငါးနှစ်ကြာပြန်လည်သုံးသပ်တင်ပြထားသည်, ချိန်ညှိဘို့လုပ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်နာလန်ထူသေချာစေရန်အလို့ငှာ. ငါကျိုးပဲ့သောစံချိန်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မအတော်လေးနိုးနိုးကြားကြားရှိသောဖြစ်ကြောင်းကို (ထပ်တလဲလဲဖြစ်ခြင်းမ) နှုန်းထားများတိုးတချို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံထောက်ပြကျော် (ပင်မဖြစ်စလောက်လျှင်) အာဏာကိုကဏ္ဍတွင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ထပ်မံဖြစ်ခြင်း, ငါသည်အထားပြီးဒီမျဉ်းတလျှောက်တွင်ဆွေးနွေးနှီးနှောကြပါပြီကတည်းက.
ကျနော်လျှပ်စစ်အတွက်နှုန်းထားများအများပြည်သူဆန္ဒပြခံရဖို့တက်သည်ကိုမြင်ကြဘူး, ဈေးနှုန်းအပေါ် NERC ရဲ့ Vice-တူချုပ်ကိုင်ဖြင့်သွား, မဆိုဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ripple အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အစိုးရရဲ့အသိစိတ်, အောက်ပါတို့၏စည်းမဲ့ကမ်းမဲ​​့ပြည်နယ်ဆက်လက်ရှိတောင်မှအဘယ်မှာရှိ:
ဓာတ်ငွေ့ရောင်းချမှု (မျိုးဆက်စက်ရုံတွေဓါတ်ငွေ့ရောင်းချမှုအတွက်အခက်အခဲကြောင့်ဝက်ရူးပြန်အာဏာစစ်အစိုးရစေသည်); ဆင်းရဲသောသူကိုဝန်ခွဲဝေချထားမှုနှစ်ခု dno (ဤတိုင်းပြည်တွင်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကိုမျိုးဆက်တစ်ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်အခြေပြုထားပါသည်. ငါသည်ဤရေးဖို့အဖြစ်, ဖြန့်ဝေသည့်ကုမ္ပဏီများပင်လျှင်တာဝန်ပေးအပ်ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းလက်ခံရရှိနေကြတယ်); အမြောက်အများလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူ (လျှပ်စစ်မီးဈေးကွက်မှအမြောက်အများလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူရန်အချို့ DNOs ပုံမှန် '' wobbly '' စွမ်းရည်, လက်လီအရောင်းနှုန်းနဲ့ရောင်းချဖို့အသုံးပြုသူများအားရပ်တန့်ရန်); တချို့ကိုလည်း DNOs ယခု '' ဘဏ္ဍာရေးပင်ပန်းနွမ်းလျ '၏အစောပိုင်းနိမိတ်လက္ခဏာများဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်, လည်ပတ်မှုစရိတ်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု - ဤအရပ်မှအလေးအနက် post-ပုဂ္ဂလိကပိုင် '' ဘဏ္ဍာရေးသောကများ '' ထုတ်ဖော်ပြောဆို, အခြေခံအဆောက်အအုံထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်တိုးချဲ့မှုအတွက်ရန်ပုံငွေဆေးထိုး.
ငါသည်အနိုင်ဂျီးရီးယားလက်ရှိနှင့်အတူရင်ဆိုင်တွေ့သည်အဘယ်အရာကိုလျစ်လျူရှုရန်သင့်မတိုက်တွန်းခဲ့ – 9000mw တဝိုက် hovers က install လုပ်ထားတဲ့လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း; 5,000mw ထက်မပိုရရှိနိုင်အသုံးဝင်သောစွမ်းရည်; နှင့်နိုင်ငံ၏လက်ရှိဝယ်လိုအားနှင့် ပတ်သက်. 16,000mw မှာခန့်မှန်းခြေခံရ. ဤအခြေအနေသည်ဝေးကျနော်တို့ခန့်လက်မကျွန်တော်တို့ရဲ့သွင်းကြ၏ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်ထံမှဖြစ်သည်. မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ငါတို့ရှိသမျှသည်အလိုဆန္ဒက over-ညဉ့်အချိန်အရာမသည်အဘယ်ကမှရရှိခြင်း, ဒါပေမယ့်ဧကန်အမှန်အကြာတွင်အပြုသဘောရလဒ်တွေထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟုဖြစ်စဉ်ကို-based လှုပ်ရှားမှုများအများကြီးအကျုံးဝင်သည်.
ပိုးတောင်မာ, စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. သံသယလုံးဝသင်ပယ်မထားသင့်ပါ, သို့မဟုတ်သင်မှုကြောင့်သင်တန်းတွင်ကဏ္ဍအထွက်နှုန်းအတွက်နတေဲ့အဘယ်သို့သောလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ထွက်လက်လွတ်လိမ့်မယ်. ငါ့လာမယ့်, နှင့်တတိယ, နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပေါ်မှာဤစီးရီးအတွက်ခေါင်းစဉ်, "အာဏာကိုကဏ္ဍတွင်ရွှေ" သင်၏မျက်စိပိတ်အချို့အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားအထောက်အကူပြု.
ငါသည်အ Buba နေဆဲစောင့်ကြိုနေသောခံစားမှုကိုနို့တိုက် ('' ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရှည်စွာသဒ္ဒါ '' ပြီးနောက်) ratepayers အပေါ်တိုးမြှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုငြှိမ်းသတ်နိုင်ဖို့အဘယ်သို့ပြုရပါမည်.
ကပုံမှန်နိုင်ဂျီးရီးယားလျှပ်စစ်မီးစားသုံးသည်ကိုသင်တို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်, သည့်အခါရရှိနိုင်သော, သုံးစွဲမှုအတွက်လျော့ချရေးမှတဆင့်စာရေးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းအောက်မေ့ဖြစ်ခြင်းမ? ကိုယ်ကတချို့လျှပ်စစ်မီးလုံးရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဘုံမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သံသယ (အဆောက်အဦးများပေါ်တွင်ဒါခေါ်လုံခြုံရေးအလင်းအိမ်) စွဲလမ်းအပေါ်ဖြစ်ခြင်း, ပင်နှစ်လယ်ပိုင်းရက်ကြာမှာ. တူညီသောအာဏာရဲ့မဆင်မခြင်သုံးစွဲမှု၏အခြားပုံစံများအဘို့အဟုတ်မှန်သောရရှိထားသူ. ထိုကဲ့သို့သောအတွက်လုပ်ကြသူတွေဟာမကြာခဏလျှပ်စစ်မီးဥပဒေကြမ်းများ '' မစင် '' သူတို့လိုအဆင့်မှာဆက်ရှိနေရန်ရှိသောအခါအသံကျယ်အော်ဟစ်သောသူဖြစ်ကြ၏. ဤအဆင့်များအပေါ်ပညာတတ်ရပါမည်သူကိုစားသုံးသူများ၏အမျိုးအစားထိုကဲ့သို့သောကရိယာကိုပိတ်လိုက်တဲ့အဖြစ်လုပ်ရပ်တွေခဲ့ကြသည်ကိုဖွဲ့စည်း, အလင်းအိမ်, ဤအသုံးပြုမခံရကြသောအခါသို့မဟုတ်ရုပ်သံ; ကျစ်လစ်သိပ်သည်း florescent အလင်းမီးသီးများအသုံးပြုခြင်းပြောင်းလဲနေတဲ့; ညဦးယံ၌အဝတ်ကိုလျှော်မ, စသည်တို့ကို.
မီတာများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အများပြည်သူဆူညံခြင်း DNOs အားဖြင့်ဆင်ယင်ခဲ့ကြပြီးနောက်မကြာမီ, ငါသည်အဝယ်လိုအား-Side-စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် '' ဟုလမ်း hit 'ဖို့သူတို့ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင် (DSM) အစီအစဉ် - DNOs ဒီကစားစရာမဟုတ်ရပါဒါမှမဟုတ်နောင်တရလိမ့်မယ်. အစောပိုင်းကခေါင်းစဉ်မှာအရိပ်အမြွက်အဖြစ်, DSM သူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်နှင့်ဝန်စီမံခန့်ခွဲပုံကိုပေါ်အသုံးအဆောင်များအားဖြင့်စားသုံးသူများ၏ပညာရေးဖြစ်ပါသည်. အကျဉ်းချုပ်မှာ, DSM စားသုံးမှုအပေါ်ဖြတ်ဖို့မည်ကဲ့သို့ဖောက်သည်အကြံပေးချက်များနှင့်ထိုးထွင်းဉာဏ်ကိုထောက်ပံ့ပေး (စွမ်းအင်ကိုအပေါ်ကုန်ကျစရိတ်ကယ်ဖို့, နောက်ဆုံးမှာငွေကိုချွေ).
ငါသစ္စာဉာဏ်အလင်း package ကိုရှိသည် (ပင်ပြည်သူလှုံ့ဆော်တဲ့နည်းဗျူဟာများအပါအဝင်) ဒီအပေါ်, သောစွမ်းအင်ကိုစားသုံးသူများထံသို့ကရိယာနှင့်မက်လုံးပေးချွေတာဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း (e.g. အထွတ်အထိပ်စျေးနှုန်း) အာဏာကို save လုပ်ဖို့ကိုဘယ်လိုပေါ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုအကြားစိတ်ဝင်စားမှုကိုလှုံ့ဆော်နိုင်. ပိုးတောင်မာ, အဲဒီအကြောင်းမျှမပဉ္စလက်လည်းမရှိ. '' မလိုအပ်ပါဘူးလျှပ်စစ်မီး '၏စားသုံးမှုဖြတ်တောက်ခြင်းတိုးမြှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု dousing အတွက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်သည်.
လူတို့သည်မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းမပြောင်းပါနှင့်အမျှ, intensive စားသုံးသူပညာရေးနှင့်ဟု ဆို. မရလည်းမရှိ, နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုဆက်ဆက်အသစ်အမိန့် portends အဘယ်သို့သောတလျှောက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့. ကျွန်တော်တို့ကိုအပြုသဘောစဉ်းစားကြစို့, နှင့်အလွန်အမင်းအရေးပါဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ် – ပိုးဟပ်အရပ်လုံးကျော်တွားတတ်သောမြင်နိုင်ပါသည်နေစဉ်အမြဲတမ်းကြွက်အကြိုင်.
ငါသည်အစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အကြံပေးအဖြစ်ငါ့ကျေးဇူးကိုခံရသောသူတစ်ဦးအသုံးဝင်သောဖြေရှင်းချက်ပေးသူသည်တည်နေရန်ရွေးချယ်နေစဉ်, မကောင်းကောင်းသင်နှင့်သင့်မိသားစုဆန္ဒရှိ, နှင့်သင်အမြဲဤကြီးစွာသောတိုင်းပြည်ကောင်းတစ်ခုနိုင်ငံသားနေသင့်တယ်လို့အကြံပေး.
1 မှတ်ချက် အပေါ် "နိုင်ငံသား Buba မှပေးစာ: လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းမှတုံ့ပြန်မှု Dousing (2)"
Iteire Apollos | ဧပြီလ 2, 2014 တွင် 12:58 ညနေ | ပြန်ကြားချက်